I-Baggy Boyfriend yatyhola i-Harem Jeans - i-Buddhatrends
Uhlobo olulodwa / uBlue Blue
Ezinye iintsuku zenzelwe i-denim kwaye ezi jeans zineendlela ezikhethekileyo kunye ne-ultra fit. Uya kuba yintombazana epholile kakhulu kwibloko kule ndawo yokuzilahla, i-Boyfriend Jeans yeHarm Jeans ekhangelekile.
Yenza umgangatho wesitratato sakho ngokufaka iibhotshi zokulwa kunye ne-favorite ye-90 ye-khonti kwikhatile yeebhokhwe. Okanye uye kwi-Grunge nge-tee ephahliweyo kunye ne-hoodie. Unokuyithabisa kunye ne-top hippie tank top, izicathulo zeBharkenstock uze ufake iintyatyambo kwizinwele zakho. Ungakwazi ukuzityhila ngeendlela ezininzi, kukuya kuwe ukwenza ikhangelo olifunayo!
I-Corduroy yeGreen ngokubanzi $66.75 $89.00